Pof Shrink Film, Pof Shrink Duub - GS PACK
Iska yaree aqoonta filimka
Naqshadaynta - Qaybinta - Teknolojiyada
Xidhmada Lacagta Weyn (ShenZhen) Co., Ltd.
Xidhmada Weyn ee Lacagta (Shenzhen) Co., Ltd. xafiiska weyn ee Hongkong, oo la aasaasay 1993, wuxuu ku yaal agagaarka quruxda badan ee Shiyan Lake Vacation. Dalxiis ee GuangMing Degmada Cusub, Shenzhen, Shiinaha. 20 daqiiqo oo safar ah garoonka diyaaradaha caalamiga ee Shenzhen. Waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha xirfadleyda ugu waaweyn ee soo saara filimka yareynta polyolefin ee Shiinaha. Iyo kii ugu weynaa ee wax soo saara koonfurta Shiinaha oo leh in ka badan 19 sano oo khibrad u leh soo saarista ayaa hoos u dhigaya qalabka wax lagu duubo.
Kuleylka kuleylka sare ee hufan ee POF hoos u dhaca ...
Factory Supply hufan Polyolefin POF Heat ...
GS Soft & Heerkulka Hoose P OF Shrink Film
Daacadnimo, furfurnaan iyo iswaafajin, horumar is waafajinaya, iyo abuurista guul-guul; Ka badbaado tayada, u kobciso sumcadda, iyo ka-faa'iideysiga maareynta; Kaqeybgal buuxa, xoojinta maamulka, ku dadaal inaad kaamil ahaato, tayada tuurista ...
Mahadnaq, togan, feejignaan leh, hawlkar ah, oo iskaashi leh; Walaalnimada, wada noolaanshaha, hal-abuurnimada, isgaarsiinta, iyo guul-guuleysiga; Horay u soco, guuleysta, la dagaallama, isgaarsiiya, jabiya, gaara
Ogsoonaanta tayada ayaa ku jirta qalbigayga, tayada wax soo saarku waxay ku jirtaa gacmahayga; Si taxaddar leh, taxaddar leh, oo feejignaan leh, si ay macaamiisha u nasan karaan annaga; Wax ku abuur qalbi, ku adeegso kalsooni, oo farxad ku noolow
182020 / Dec.
Farqiga u dhexeeya filimka PE / PVC / POF ayaa yaraanaya
1. Qeexitaano kala duwan: Filimka 'PE' waa maaddo leh adkeyn aad u wanaagsan, mana sahlana in lagu burburiyo saliidda caagga ah ee caadiga ah. Sababtoo ah filimka PE waa mid jilicsan oo adag, ma fududa in la jajabiyo, iyada oo aan lagu xusin heerkulka sare ee qalabka xawaaraha sare leh, taas oo ka dhigi doonta LDPE inuu dhalaaliyo oo uu xayeysiiyo ...
082020 / Dec.
Yaree kala soocida filimada
Filim soo gaabiya waxaa loo isticmaalaa iibinta iyo geeddi-socodka gaadiidka ee alaabooyinka kala duwan. Shaqadeeda ugu weyni waa xasilinta, daboolida iyo ilaalinta sheyga. Filimka yaraanaya waa inuu lahaadaa iska caabbinta daloolka sare, yaraynta wanaagsan iyo culeyska hoos u dhaca qaarkood. Intii lagu guda jiray howsha sii yaraaneysay, filimku ma soo saari karo ...
042020 / Dec.
Ha i weydiinin waa maxay kuleylka POF
Filimka kuleylka-yareyn kara ee POF wuxuu la kulmaa isticmaalka weel-xirmooyinka baakadaha cusub ee leh qaabab kala duwan Filimkan aan sunta lahayn, ur lahayn, dufanka u adkaysta, iyo filimka u hoggaansamaya nadaafadda cuntada ayaa u oggolaanaya naqshadeeyayaasha in ay isticmaalaan midabbo indho qabad leh si ay u gaaraan naqshad calaamadeysan 360 °. Sii ciyaar buuxda hal-abuurka iyo male-awaalka, si ...
Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya POF iyo asaga ...
Ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya POF iyo filimka kuleylka yareyn kara? POF macnaheedu waa filim kuleylka yareyn kara. Magaca buuxa ee POF waxaa loogu yeeraa lakabyo badan oo iskudhaf ah oo polyolefin kuleylka filimka yareyn kara. Waxay u isticmaashaa polyetylen-cufan hooseeya sida lakabka dhexe (LLDPE) iyo co-polypropylene (PP) sida gudaha iyo dibedda ...
Cinwaanka: No.1 YangIanshan Aagga Warshadaha, Yulv Village, Yutang Town, GuangMing District ShenZhen China
Khadka tooska ah: + 86-755-27164568
Polyolefin Pof Shrink Film, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Yaree Filimka PCv, Iskudhin Duubista Filimada, Duubista Polyolefin Pof,